कोरोना भाइरस महमारी: नेपालमा लाखौँ मानिसको रोजगारी गुम्यो, सरकारले कसरी गर्न सक्छ सहयोग - Sawal Nepal
कोरोना भाइरस महमारी: नेपालमा लाखौँ मानिसको रोजगारी गुम्यो, सरकारले कसरी गर्न सक्छ सहयोग
काठमाडौं सवाल नेपाल २०७७ कार्तिक २८, १५:४०
कोरोनाभाइरस महामारी र त्यसको सङ्क्रमण विस्तार गर्न लगाइएका लकडाउनको सबभन्दा धेरै घातक असर मानिसहरूको जीविका परेको छ।
नेपालमा यही कारण १५ लाखभन्दा धेरै मानिसले रोजगारी गुमाएको हुनसक्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
करिब ८० लाख मानिस कुनै न कुनै काममा अल्झिएको अनि थप मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्र भनिने अभिलेखमा नदेखिने रोजगारीमा सामेल भएको मानिन्छ।
“यो पृष्ठभूमिमा यति सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्नु भनेको निकै धेरै हो। हाम्रो ठूलो जनशक्ति श्रममा आधारित नै रहेको हुनाले हामीलाई धेरै क्षति भएको छ,” भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।
“यो अत्यन्त खराब अवस्था हो। रोजगारी गुम्नुको अर्थ गरिबी बढ्नु पनि हो। कोभिडकै कारण नेपालमा थप १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको विवरण आएका छन्,” अर्थविद् केशव आचार्यले बताए।
महामारीबाट जोगिए पनि भोकमरीबाट ‘कामदारहरूको ज्यान जान सक्ने’ चेतावनी
यसरी रोजगारी गुमाउनेमा ठूलो सङ्ख्या महिलाहरूको पनि छ।
“हालसालै महिला मन्त्रालय अनि राष्ट्रसङ्घको महिला निकायले गरेको द्रुत अध्ययनका बेला सम्पर्क गरिएका महिलाहरूमध्ये ८३ प्रतिशतले काम गुमाएको पाइयो। त्यसमाथि पनि पहिलेदेखिनै जोखिममा परेका मधेशी वा मुस्लिम वा एकल महिला समूहहरूमा झन् धेरै अप्ठेरो परेको छ,” महिला रोजगारीका विषयकी जानकार शरु जोशी श्रेष्ठले बताइन्।
प्रत्येक वर्ष सरदर पाँच लाख थप मानिसलाई रोजगारी दिलाउनुपर्ने लक्ष्य त पूरा हुन नसकिरहेको अवस्थामा एक्कासि गुमेको यति धेरै रोजगारी पुनर्स्थापना गर्न सकिएला त?
अर्थविद्हरू भन्छन् – सकिन्छ तर त्यसका लागि सरकारले दृढ अठोटका साथ केही काम तत्काल गर्नुपर्छ।
के होलान् त त्यस्ता काम जसले अर्थतन्त्रलाई पुन: चलायमान बनाउन सक्छन्?
सरकारका सामु के छ विकल्प?
कोरोनाभाइरस महामारीको बेला रोजगारीमा पुगेको क्षति नेपालले मात्र बेहोरेको नौलो सङ्कट होइन। विश्वभरि यस्तै प्रभाव परिरहेका छन्।
अनि विश्वभरि विभिन्न सरकारहरूले यसलाई पुन: जागृत गर्न कदम पनि चालिरहेका छन्।
छिमेकी देशहरू बाङ्ग्लादेशमा प्रत्यक्ष नगद सहयोगसहित अर्बौँ डलर बराबरको राहत प्याकेज ल्याइएको छ भने भारत र पाकिस्तानले पनि ठूलो धनराशिसहित आर्थिक पुनरुत्थानका विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेका छन्।
नेपालले केही अर्ब रुपैयाँ कोरोनाभाइरस व्यवस्थापनमा खर्च गरेको र केही राहत मौद्रिक नीतिमार्फत् अघि सारे पनि आर्थिक पुनरुत्थानका उल्लेखनीय प्याकेज ल्याएको छैन।
सङ्कटका बेला सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गरेर रोजगारी सृजना गर्न सुझाइएका छन्
अर्थविद्हरूले अब त्यस्तो गर्न ढिलो गर्न नहुने सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
“अर्थतन्त्र त्यतिखेर मात्र चल्छ जतिखेर मानिसहरूसँग आयस्रोत हुन्छ। अझ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त बाँच्नकै निम्ति पनि मानिसहरूलाई आयस्रोत जरुरी हुन्छ। त्यो रोजगारीमार्फत् नै गरिनुपर्छ,” अर्थविद् पुष्प शर्माले बताए।
तत्काल व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न अहिले सरकार नै अघि सर्नुपर्ने सुझाव पूर्वसचिव खनालले दिएका छन्।
“यस्तो ठूलो खति भएको बेला अर्थशास्त्रको नियमले के भन्छ भने निजी क्षेत्रले मात्र यो सक्दै सक्दैन। सरकारले वित्तीय नीतिमार्फत् कदम चाल्नै पर्छ। यसको तात्पर्य के हो भने सरकार वा सरकारी संयन्त्रले खर्च वृद्धि गरेर श्रममूलक योजनामा लगानी गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै निर्माण कार्य होस् – त्यो अहिलेको लागि वा भविष्यका लागि आवश्यक छ/छैन नहेरीकनै लगानी गर्नुपर्छ ताकि मानिसहरू काममा अल्झिन पाऊन्,” उनले भने।
सरकारले केही खर्ब रुपैयाँ विकास निर्माण कार्यहरूमा तत्काल लगानी गरेर रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अनि त्यसो गर्न नेपाल सरकारसँग स्रोतको अभाव नहुने उनीहरूको ठम्याइ छ।
दमकको कोरोना अपडेट – ८५५ संक्रमित, ५५३ जना संक्रमणमुक्त, २७३ उपचारमा, २९ को मृत्यु